शर्तसहित आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालनमा ! – Mission Khabar
शर्तसहित आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालनमा !
मिसन खबर ९ असार २०७८, बुधबार ०६:३०
काठमाडौं । सरकारले शर्तसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गन्तब्य र वायुसेवा कम्पनीअनुसार कोटा तोकेर हवाई उडान खुला गरिने जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ कुल उडान संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ । यसको तालिका र मिति भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैले केही दिनमै तय गर्ने बताइएको छ । बुधबारसम्म तालिका तय गर्ने तयारीमा पर्यटन जुटेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ समेत नियमित हवाई उडान थप गर्ने निर्णय गरेको छ । अब काठमाडौं–दोहा रुटमा नेपाली वायुसेवाले दुई र कतारका वायुसेवाले दुई गरी सातामा ४ उडान भर्नेछन् । काठमाडौं–इस्तानबुलमा साताको २, काठमाडौं–दुवई रुटमा समेत सातामा चार उडान हुने भएका छन् ।
काठमाडौं दमाम रुटमा साताको २, काठमाडौं–कुवेतमा साताको दुई, काठमाडौं–मस्कटमा साताको १ र मलेसियामा साताको चार उडान सञ्चालन गरिने भएको छ । दक्षिण कोरियामा एक र जापानमा एक उडान खुला भएको छ । काठमाडौं–छेन्दु र ग्वाङझाओ रुटमा साताको एक–एक उडान सुचारु गरिने भएको छ ।